काठमाण्डौको गोठाटारमा भएको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल, के थियो विवाद ? (भिडियो) – Nepali in Australia
May 26, 2021 autherLeaveaComment on काठमाण्डौको गोठाटारमा भएको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल, के थियो विवाद ? (भिडियो)
काठमाडौंको गोठाटारमा भएको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल भएको छ । जसमा सुकुम्बासी माथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको देखिएको छ । प्रहरीको समुहसंग क्यामेरा लिएर पुगेका संचारकर्मीको पनि वि वा द भएको भिडियोमा देखिएको छ ।